Amahembe e-denim kuko konke ukuthanda | Bezzia
Amahembe e-denim kuko konke ukuthanda
UMaria vazquez | 22/07/2021 18:00 | Ngigqokani
Kule sizini ngeke kube lula ukuyithola amahembe ama-denim kuzinhlu zamafashini. Asifuni ukusho ukuthi azikho, kepha aziwona umkhuba ngakho-ke zihlala endaweni yesibili. Ngaphandle kwalokhu, eBezzia siyaqhubeka nokubheja ngale ngubo ngenxa yokuguquguquka kwayo.
Njengehembe, njengengubo eyeqile, njengejakhethi ... amahembe ama-denim angakwazi ukumboza imisebenzi ehlukene kuye ngesikhathi sonyaka nesimo sezulu. Ziwumthombo omuhle kupotimende Futhi kule sizini ungakhetha phakathi kweziphakamiso ezimbili ezihluke kakhulu, kuya ngokuthi ufuna umklamo wakudala noma onemfashini.
1 Amahembe akudala
Uma ufuna ingubo engaphelelwa yisikhathi futhi eguquguqukayo, ukukhetha ihembe elijwayelekile le-denim kuyindlela engcono kakhulu. Yenziwe ngekotini, nge umphetho oyindilinga namapokhethi angaphambili, uzobathola ezinhlotsheni ezahlukahlukene. Zithole eMassimo Dutti (ngaphansi kwalesi sigaba) naseZara (esembozweni) ngohlobo lwe-oversize.
Singafaka kuleli qembu lakudala ihembe eline- ama-bass amnyama, ngokuphambene, ozokuthola ukuthengiswa kwaFree People. Uhlobo olusha noludala, ngasikhathi sinye, olunephethini ekhululekile futhi ekahle ukuhlanganiswa nayo amajini akho.
Yiziphi izinto okufanele sizibheke ehembe eliyi-denim ukuze sikwazi ukusho ukuthi lijwayela izitayela zamanje? Ikhukhumele imikhono Yiqiniso, bayisibonelo esisobala kakhulu futhi asikwazanga ukuthanda okuningi iziphakamiso zeMassimo Dutti ezenziwe ku-100% Syobe Lyocell.
Ama-ruffles namakhola we-garter ezinye izinto ezisivumela ukuthi sihlukanise lawa mahembe ngokuthi "ayimfashini". Kubantu Abakhululekile ungathola izibonelo ezimbalwa zalolu hlobo; imiklamo engajwayelekile ilungele ukudonsela ukunaka kule ngubo ethile. Kuthiwani uma futhi sifaka umbala womkhuba kulezi? ILilac iyindlela engcono kakhulu ngayo, ngaphandle kokungabaza!
Uhlobo luni lwehembe le-denim oluthanda kakhulu?
Indlela ephelele ye-athikili: Bezzia » imfashini » Ngigqokani » Amahembe e-denim kuko konke ukuthanda
Ungazilungisa kanjani izinwele ngofulawa we-cornstarch
Ukuhlobisa imishado yasekhaya